Inona no hataon'ny dokambarotra zanatany misavoritaka | Martech Zone
Tsy azoko antoka raha mbola nahita an'ity horonantsary ity ianao. Izany tsy azo antoka amin'ny asa saingy mampihomehy tokoa ny momba ny lohahevitry ny gazety lehibe sy ny famoahana vaovao nentim-paharazana mitady hampitombo ny vola miditra amin'ny alàlan'ny fampiratiana ny dokam-barotra teratany, fantatra ihany koa amin'ny hoe votoatin'ny mpanohana.
Fampirantiana zanatany dia fomba fanaovana dokambarotra an-tserasera izay ezahan'ny mpanao doka hahasarika amin'ny alàlan'ny fanomezana atiny mifanaraka amin'ny zavatra niainan'ny mpampiasa. Ny endrika doka zanatany dia mifanandrify amin'ny endrika sy fiasan'ny traikefan'ny mpampiasa izay nametrahana azy ireo.
Nesoriko ny olana roa izay noresahin'i John Oliver tamin'ny dokam-barotra zanatany.
Native Advertising dia fitaka, indrindra raha ny fahatokisana an'ireo fikambanana ireo no zava-dehibe indrindra amin'ny fisiany.
Ny indostrian'ny fampitaovana mahazatra dia miresaka momba ny dokam-barotra zanatany ho vanona, mendri-pitokisana fomba fitadiavam-bola… mandritra ny famoahana vaovao izay tsy.
Tsy manana tsy fifanarahana amin'i John Oliver aho momba an'io. Mila manontany tena ianao hoe maninona no mivoatra ny famoahana boky sasany, fa tsy ny fampitam-baovao mahazatra. Tsy hoe tsy handoa vaovao ny olona - mandoa loharanom-baovao amin'ny loharano iray taonina aho. Izy ireo dia mamono ny banga ary manantena fa homena izany.
Mampinono ny media mahazatra
Nandritra ny taona faramparany niainako tamin'ny sehatry ny gazety dia kivy tanteraka aho momba ny toetoetran'ny vaovao. Raha manana fidiram-bola an-tapitrisany sy fitaovana rehetra fantatry ny olona ny departemantan'ny marketing amin'ny tahiry, ny mpiara-miasa amiko - mpikaroka ao amin'ny efitrano fampahalalam-baovao dia nanimba ny birao taloha ary tsy misy fitaovana hafa ankoatry ny Google hanao ny asany. Namoaka fahagagana vitsivitsy izy ary nampihetsi-po ny fony, saingy fantatro fa nanomboka ny fihodinana ambany. Ny mahatsikaiky dia ny fihetseham-po manohitra ny orinasa ao amin'ireo lahatsoratra ao amin'ny vaovao mety ho nateraky ny fitiavam-bolan'ny indostria. Tsaroako tsara rehefa nanana 40% ny tombony azontsika ary nanapaka ny tetibolan'ny famoahana. Ugh.
Avereno jerena ny fahana ara-tsosialin'ny tobim-baovao rehetra ankehitriny ary toa olo-malaza mag. Nandany fotoana be dia be tamin'ny sombin-tantara momba ny toetr'andro, naoty ara-panatanjahan-tena, ary ny heloka bevava rehetra izy ireo izay natsofoka tao anaty varavarankely 30 minitra na 60 minitra ary tsy nisy lalina intsony. Mazava ho azy, ity dia fampahalalana azonao atao amin'ny loharano maromaro. Azo inoana fa loharanom-pahalalana mitovy ihany no ahazoan'ny mpanao gazety izany.
Tamin'ity taona ity dia nirehareha aho fa teo amin'ny vaovao teo an-toerana hanambara ny fanangonam-bola isam-paritra. Nandany 20 segondra teo ho eo niaraka tamin'ny mpanao gazety teo am-pandriana aho rehefa handeha hiaina ilay fizarana izahay. Tsy nisy resadresaka ifanaovana, tsy nisy fahitana, tsy lalina ary tsy nisy fitiavana ilay tantara. Nentina tany amin'ny studio aho, nanao ilay toerana, ary avy eo nalefa. Tsy hoe nahagaga ny tantarako, fa andro vitsivitsy nandavahana dia mety namokatra tantara tsy tambo isaina izay nanohina ny fon'ny olona ary nanintona ny sain'ny olona ho any amin'ilay fantsona.
Amin'ny alàlan'ny fakana vola teratany dokam-barotra, ireo filazam-baovao ireo dia tsy milaza amintsika fa tsy atokisana izy ireo… milaza amintsika izy ireo tsy matoky ny tenany akory izy ireo. Nilavo lefona ry zareo.
Miakatra ny fangatahana fampahalalana
Ny mampihomehy, mazava ho azy, dia ireo mpanao gazety voaofana sy manan-talenta manao fikarohana sy manoratra tsara kokoa noho ny olona rehetra eto ambonin'ny planeta. Mirongatra ny fangatahana atiny raha toa kosa ny gazety sy ny fahitalavitra mampihena ny teti-bolany.
Ny olana dia tsy hoe tsy afaka mivarotra ny vaovao, fa tsy manome ny sarobidy andrasan'ny olona. Ny vaovao izao dia famoahana fampielezan-kevitra ho an'ny mpanao politika, fanoherana ny fandraharahana amin'ny toekarena izany rehefa mila orinasa mihoatra ny taloha isika, ary fandaniam-bola izany rehefa mila manapaka ny fehikibo. Ireo izay mitarika ny vaovao dia tsy manitsakitsaka ny fitokisana amin'ny dokam-barotra zanatany fotsiny, fa naneho ny fitokisany am-bahoaka izy ireo noho ny asa fanaovan-gazety tsy dia manara-penitra, tsy dia lalina ary mavo.
Ny antony mamakiako bilaogy teknolojia na mihaino podcast orinasa fa tsy haino aman-jery nentim-paharazana dia satria novokarina niaraka tamin'ny matihanina izay mahatakatra akaiky ny zavatra ny votoaty, ara-potoana rehefa manao ny fikarohana izy ireo, ary manta ary matetika no tsy voasivana hahazoana izany. fahamarinana. Mijery ny vaovao miresaka momba ny teknolojia aho ary manafina ny tavako matetika amin'ny henatra noho ny tsy fahampian'ny fahalalana. Azoko atao ihany koa ny mampiasa media sosialy hizaha ny vaovao avy amin'ny orinasam-pandraharahana ary hahazoana fomba fijery samihafa avy amin'ireo vondrona misy olona matihanina tsara fantatro fa miaraka amiko. Izany dia ahafahako mampiasa ny fampahalalana rehetra hitako ary mampivelatra ny fahalalako manokana fa tsy ny hevitra diso momba ny mpanao gazety maika.
Fanamarihana hafa… tadidinao fa nanandrana nanimba ny bilaogera sy bilaogy ny sehatry ny vaovao? Nankahala an'ity indostria ity izy ireo ary niady mihitsy aza mba hanala ny fiarovana azy ireo tamin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety. Rehefa resy izy ireo dia nitodika tany amin'ny fanaovana bilaogy ny gazety ary lasa manao famokarana atiny ho an'ny orinasa ve izy ireo? Wow… miresaka momba ny valopolo taona!
Ny orinasa dia tokony hisoroka ny dokam-barotra zanatany
Ny fiatraikany ratsy lehibe indrindra amin'ny tranokalam-baovao dia ny fahatokisana. Nanadihady ireo mpampiasa tranonkala amerikana an-tsakany sy an-davany mba hahalalana raha matoky ny tranokala misy lahatsoratra tohana izy ireo na tsia:
Mety ho olana amin'ny orinasa koa izany. Amin'ny asa rehetra nataontsika tamin'ny mpanjifa an-tserasera, fampiroboroboana ny bilaogy ataon'ny orinasa sy ny media sosialy - ny ivon-toerany rehetra dia ny nahazo ny fahatokisana sy ny fahefan'ny mpamaky. Raha tsy misy fahatokisana, dia vitsy dia vitsy ny olona izay handray ny telefaona ary maniry ny hanao raharaham-barotra aminao. Ny fahatokisana no zava-drehetra ary izany teratany dokam-barotra dia ny famaritana ny famitahana mihitsy… ny fanisy saina kely eo aminy izay milaza fa ny atiny tohana dia tsy manova ny zava-misy fa eo hamitahana.
Tsy manana atiny feno karama ato amin'ity bilaogy ity izahay. Notsapainay izany taloha ary samy tsy nahomby izy io ary koa nandratra ny lazanay. Ankehitriny dia manana mpanohana tranonkala izahay rehetra izay mampiroborobo ny doka mavitrika ary resahinay indraindray aza izany amin'ny atiny - saingy miaraka am-pitandremana fatratra ny fifandraisanay vola. Izahay koa tsy manome toky an'ireo mpanohana anay momba izay zavatra hosoratanay na tsy hosoratanay momba azy ireo.
Rehefa mahazo mpanoratra vahiny any an-tsambo izahay, ny torolàlana voalohany dia raha mandray karama amin'ny fomba rehetra hametrahana ny atiny izy ireo, dia horoahinay izy ireo, hamafana ilay paositra, ary mety handray fepetra ara-dalàna mihitsy aza. Nasaina nivarotra tamin'ny bio-bokin'ny mpanoratra izy ireo fa tsy ao anaty atiny mihitsy. Tianay ny hampahalalana ny lahatsoratray - voahodidin'ny raharaham-barotra fa tsy manandrana hamily azy io amin'ny fomba mamitaka. Hmmm… mampatsiahy anao ny andro taloha tamin'ny vaovao mahazatra?
Raha mila fanampiana amin'ny famokarana atiny toa ny infographic sy whitepapers ny mpanjifanay, dia hamorona azy izahay ary hamoaka azy amin'ny ny tranonkala, hampiroborobo izany amin'ny ny tambajotram-pifandraisana… ary avy eo azontsika aseho azy - miaraka amin'ny fanesorana - avy amin'ny tranokalanay. Na ny fanonona ny tranokalanay aza dia hanosika ny olona hiverina any amin'ny tranokalany, na izany aza. Tsy mitady hifaninana amin'ny masomaso izahay fa hiezaka hanome lanja ny mpamaky anay. Misy atiny am-polony maro novokarina ho an'ny mpanjifa izay mbola tsy nozarainay teto mihitsy.
Tsy fampahalalam-baovao akory izahay ary miaiky ny andraikitra nomena anay tamin'ny fitomboan'ny mpihaino sy ny fiarahamoninay teto. Saingy tsy mila mandoa vola sy mitantana birao misy rafitra fitantanana maro isika avy eo. Angamba ny sandan'ny vaovao omen'ireto toeram-pivarotana ireto dia novaina tsotra izao ho tena mendrika ho an'ny besinimaro. Angamba mila mijery izy ireo hanamafisana ny ekipan'ny fanontana azy ireo ary hifantoka amin'ny fanomezana kalitao fa tsy hampitombo ny vola miditra. Miaraka amin'ny fahatokisana ny vola azo.
Mopub dia nizara ny habetsaky ny fandaniana dokambarotra teratany eo amin'ny tambajotran'izy ireo manokana:
Photo: Ny herinandro farany anio miaraka amin'i John Oliver
Tags: Contentlyhoronan-tsary mampihomehyhbojohn oliverfanaovan-gazetymopubteratany dokam-barotrafampahalalam-baovaogazetympitoryvotoaty voohanahaino aman-jery nentim-paharazanainona ny dokam-barotra zanatany